BOOBKII HARGEYSA WUXUU MUUJINAYAA CASHARO AY KA MID YIHIIN… BY M HAARUN | Toggaherer's Blog
« HANTI-BOOBKA DADWAYNAHA HARGEYSA LOO GAYSTAY MAXAA XUKUUMADA KALA GUDBOON? By Maxamed Haaruun…
DADKU AYAGAA KA MASUULA HANTIDOODA M HARUN WAXAAN LEEYAHAY DAWLADU KAMA MASUUL AHA HANTIDA DADKA »
BOOBKII HARGEYSA WUXUU MUUJINAYAA CASHARO AY KA MID YIHIIN… BY M HAARUN
Boobkii Hargeysa wuxu muujinayaa casharo ay ka mid yihiin… By M. Harun…
Dhawaan Hargeysa waxa ka dhacay boob aan isagoo kale horey loo arkin. Dadwayne aad u badan, oo noocyo kala gadisan isugu jira ayaa ku caydhoobay. Dhib kasta oo dhacda wax baa laga bartaa; tan miyaa wax duruus ahi ku jireen?
Horta qofkii ku caydhoobay, oo waliba aan dareemaayo in agoomo tiro badani ku jireen waxa laga yaabaa su’aasha qoraalkan ee ah wax ma laga faaiidayaa khasaarihii dhacay inay u qaataan digasho, dar kalena hadal tiro, qaaar kalena hadal-meel-waayay iyo hal dhaan wade. La yaabi mayo oo waa gartii qofba sida ay ula muuqato inuu u cabiro. Laakiin aan idhaaho:
Hantida ay baananka aduunka ee dawladaha wax daymiyaa ku shaqeeyaan yaa iska leh? Badankeeda waxa iska leh macaamiil baanka aaminay oo hantidooda ku kaydsaday. Waxay dhaqaale yahanadu yidhaahaan bangi kasta, meesha uu doono ha ku yaalo, hantida uu doono ha lahaado, hadii dadka macaamiisha ah ee wax u yaalaan ay hal mar ka wada dalbaan inuu hantidooda farta ka saaro, isla minute kaas ayuu baanku kacayaa oo albaabada loo laabayaa. Tani waxay mujinaysaa in hantida gaar-gaarka loo haysto hadii la isu geeyo ay maaliyad wayn noqonayso. Hadii ay maaliyad wayn noqotona, waxa xiga in la hawl galiyo oo la maalo.
Si kastaba ha ahaato, dadka Hargeysa ku dhaqani waxay isu geeyeen oo qofba si ku keenay hanti lagu sheegayo inay gaadhayso malaayiin doolar oo si gooni-gooni ah loogu dhiibay dad aan ehel u ahayn inay maamulaan hantida umada ee intaas leeg. Hadii aqoonta umada meel la isugu geeyo, oo company yaal dadwaynuhu leeyahay oo maal-gashi ku sameeya dalka sida beeraha, macdanta, shidaalka, waxbarashada, xoolaha nool, warshadaha yaryar iyo kuwa dhexe ee wax soo saarka la abaabulo, waxa hubaal ah in dadkuna noolaanaayo hantidoodana ay ka faaiidayan. Su’aasha meeshan taalaa waxay tahay, side dadka loogu qancin karaa inay hantidooda isu geeyaan oo ganacsi xalaal ah ku galaan. Maaha into kun doolar uu qofku qof kale isaga dhiibo, in la yidhaaho bil gudaheed ayaan faaiido baladhan kaga sugayaa iyadoo aan la cadaynin sida ay faaiidadu ku imanayso iyo habka hantida loo maamulaayo.
Isku soo wada duuboo, boobkii dhacay wuxu muujinyaa inay dadku hanti badan gaar-gaar u haystan, cid wax ugu qabata oo hantidooda ka shaqaysiisana ay doonayaan. Su’aashu waxay tahay, ganacsatada iyo aqoonyahanada umadu ma dhisi karaan hab hantida dadka looga faaiideeyo oo dalka iyo dadkuba ku macaasho? Waan aragnay shirkado dadku wada leeyahay oo aad loogu reeyay sida shirkadaha is-gaadhsiinta, xawaaladaha iyo gaadiidka, laakiin intaas miyay ku go’day? Jawaabtu waa maya ee waxa jira intaas oo baahiyood oo u banana cidii wax kala soo bixi laahyd ee hantida dadwaynaha si nadiif ah uga shaqaysiin lahayd.
By Maxamed Haaruun